BURMA: [လွပ်လပ်ခြင်း] အရှေ့တောင်တိုင်းတွင် စစ်ရေး ပြင် .
[လွပ်လပ်ခြင်း] အရှေ့တောင်တိုင်းတွင် စစ်ရေး ပြင် .
De Nay 20 June 18:31
အရှေ့တောင်တိုင်းတွင် စစ်ရေး ပြင် .
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 20 ရက် 2011 ခုနှစ် ရိုင်မရော့၊ ကျလွန်းထော သတင်း - လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ .ရိုင်မရော့၊ ကျလွန်းထော – မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင် မြို့ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အနီးရွှေနတ် တောင်ကွင်းတွင် စစ်ကားများနှင့်အတူ တပ်အင် အားများ ပြင်ဆင်ထားကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ စစ်ဘက်အသိုင်းအဝိုင်းမှ လာသော သတင်းအရ သိရသည်။
"ဘယ်ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး သွားမယ် ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး၊ ကျနော်တို့ဘက်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်၊ ကရင်ဘက်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်" ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ စစ်ဘက် တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
၄င်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သထုံခရိုင် တာဝန်ရှိသူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ "ကျနော်တို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ထဲကိုတော့ မရောက်သေးဘူး၊ ဝင်လာရင်လည်း ကျနော်တို့က ပစ်မှာပဲ" ဟု ပြောသည်။
"ကျနော်က အဘစ်လမ်းကနေ ဘုရားသုံးဆူကို ဝင်ဖို့ ရောက်သွားတယ်၊ အဘစ်လမ်းဝမှာ စစ်သားတွေရော၊ စစ်ကားတွေရော အများကြီးပဲ" ဟု ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့သည့် သံဖြူဇရပ်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ပြည်သူ့စစ်ပုံစံ ပြောင်းလဲရေးကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နောက်ဆုံး ငြင်းဆိုပြီး နောက်ပိုင်း နှစ်ဘက်ဆက်ဆံ ရေး တင်းမာမှု ရှိသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) နှင့်အစိုးရ တပ်တို့ တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေပြီး ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ဘက်သို့လည်းကူးစက်လာနိုင် ဖွယ် ရှိသည်ဟု စစ်ရေး အကဲခတ်များက သုံးသပ်ကြသည်။
Posted by Freedom Burma at 10:31